Mogadishu Journal » Mesut Özil & Sokratis ayaa laga tagi doonaa kooxda Arsenal ee Europa League
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa magacaabi doona 25ka ciyaaryahan ee Europa League ee ka qeyb galaya ololaha soo socda Khamiista, iyadoo la filayo inay seegaan Mesut Özil iyo Sokratis Papastathopoulos.
Midkoodna ma maamulin hal daqiiqo oo dhaqdhaqaaq ah xilli ciyaareedkan, iyadoo labadoodaba laga ceyriyay Gunners xagaagii. Thomas Partey, Willian iyo xitaa soo laabashada Mohamed Elneny ayaa daqiiqado ka qaatay Özil, halka Gabriel Magalhães uu si joogta ah ugu soo bilaabay safka daafaca.
Tirada kooxda haatan ee Arsenal (iyo ku guuldareysiga inay iska saaraan ciyaartoy fara badan) waxay la micno tahay in labo ciyaaryahan oo waa weyn ay seegayaan safka Europa League, sida laga soo xigtay Daily Mail, waxaa durbaba la go'aansaday inay noqon doonto kuwa la ceyriyay Özil iyo Sokratis .
Labada nin, hadalka ugu weyn ee laga hadlayo ayaa ah Özil, oo ah kooxda ugu dakhliga badan abid kooxda taasoo qaata £ 350,000-toddobaadkii.
Ma uusan u ciyaarin Arteta tan iyo markii la xiray, waxaana ku xirnaa xiriiro dhowr ah oo ka fog garoonka Emirates intii lagu jiray xagaagii. Özil marwalba wuu taaganyahay wuxuuna ku adkeystay inuusan dooneynin inuu baxo kahor inta uusan qandaraaskiisu dhamaan xagaaga dambe.
Si kastaba ha noqotee, khiyaanadan ugu dambeysa ayaa loo maleynayaa inay tahay xeelad isku day ah oo cusub oo Arsenal ah oo ay ku dooneyso inay kula heshiiso mushahar bixiyaha Jarmalka si ay isugu dayaan una qanciyaan inuu ka tago waqti ka hor sidii loogu talagalay.
Warkan ayaa imanaya waxyar kadib markii Özil uu dalbaday inuu daboolo mushaharka uu jecel yahay ee Gunnersaurus inta uu wali kooxda joogo, taas oo Arsenal siin doonta xaalad kale oo anshaxeed ah oo ay ka fiirsato. Bishii la soo dhaafay, agaasimaha farsamada Edu ayaa soo jeediyay in sii socoshada Özil ee safka koowaad ay ku xiran tahay qaab ciyaareedkiisa tababarka, iyadoo Arteta uu u muuqdo inuu aaminsan yahay in tababaraha reer Jarmal uusan u shaqeyn sida ugu wanaagsan ee asxaabta qaar.
"Halkan, waxaan ka hadleynaa dabcan waxqabadka," Edu ayaa yiri (via The Telegraph). Ciyaartoyda waxqabadka ku leh tababarka, ciyaarta, waxay helayaan fursado sababtoo ah Mikel ayaa durba muujiyay taas. Waxaa loogu talagalay qof walba. Waan ognahay sida qof walba muhiim u yahay. Waan ogahay sida ay muhiim u tahay iyo sida uu u weyn yahay ciyaaryahanka markaad xuso Mesut laakiin ugu dambeyntii waxaan ka hadlaynaa waxqabadka halkan. Haddii uu sifiican u shaqeynayo, dadku sifiican ayey u shaqeynayaan, yaa ugu fiican tababarka, kan ugu fiican ciyaarta, waxaan hubaa in Mikel uu u xulan doono inay ka mid noqdaan kooxaha ciyaaraya ama ay kursiga keydka fadhiyaan. ”